कहिलेसम्म आउला काेराेनाकाे भ्याक्सिन ? - DURBAR TIMES
HomeInternationalकहिलेसम्म आउला काेराेनाकाे भ्याक्सिन ?
विश्व् स्वास्थ्य संगठन एकातिर छ, दाेश्राे तर्फ रूसले पछिल्लाे महिनामा नै भ्याक्सिन लन्च गरेकाे थियाे। र, अहिले सम्म धेरैजनामा भ्याक्सिन प्रयाेग गरिसकिएकाेछ। जसमा राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनकि छाेरी पनि सामेल छिन् । हालै राष्ट्रपति पुटिनले दाेश्राे डाेजपछि पनि उनकि छाेरी स्वस्थ रहेकाे बताएका छन् । तर रूसले भ्याक्सिन ट्रायलसँग सम्बन्धित डाटा भने साझा गरेकाे छैन। यस्ताेमा कतिपय देशहरूले भ्याक्सिनकाे प्रभावका बारेमा र गाेपनियताका बारेमा प्रश्न उठाएका छन् ।
Previous articleछोरालाई कोरोना संक्रमण देखिएपछि स्वास्थ्यमन्त्री ढकाल होम क्वारेन्टिनमा
Next articleठेक्का लिएर मल नल्याउने कम्पनीको ठेक्का रद्द, जमानत जफत